Ozi enyere na Medjugorje na Machị 2, 2017 | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ozi enyere Medjugorje na Machị 2, 2017
Ezigbo ụmụaka, jiri ịhụnanya nne, abịara m nyere gị aka inwekwu ịhụnanya. Nke a pụtara inwekwu okwukwe. Abịara m inyere gị aka ibi, jiri ịhụnanya, okwu Ọkpara m ka ụwa wee dị iche. Maka ndịozi m hụrụ n'anya, a na m achịkọta gị gburugburu m.
Were obi gi lee m anya. Gwa m, dịka nne, banyere ihe mgbu gị, ihe isi ike na ọysụ gị. Gwa m ka m kpegara Ọkpara m ekpere maka gị. Nwa m nwoke nwere obi ebere ma na-ekpe ikpe ziri ezi. Obi nnem chokwara ka idi otua. Obi nnem chọrọ ka unu, ndi-ozi nke ihunanya m, nye ndị niile gbara gị gburu-gburu, jiri ndụ gị kwuo okwu gbasara Ọkpara m na nke m, ka ụwa wee dị iche, nke mere na ịdị mfe na ịdị ọcha lọghachi, ka okwukwe na olile anya nwere ike ịlaghachi. Ya mere, ụmụ m, kpee ekpere, kpee ekpere were obi, jiri ịhụnanya kpee, were ezigbo ọrụ kpee, kpee ekpere ka mmadụ niile mara Nwa m, ka ụwa gbanwee, ka e wee zọpụta ụwa. Jiri ịhụnanya were okwu Ọkpara m biri, ekpela ikpe, kama hụrịta ibe unu n'anya, ka obi m nwee mmeri. Daalụ.
Mirjana kwuru si na Nne anyi di aso goziri ndi no na ya ma wetakwa ihe nile nke ofufe.